မောင်ရင်ငတေ ** MAUNGYINNGATAY **** မောင်ရင်ငတေ ***: ** အိုး ရှောင် ဇေ လီ ဇေ ** *
ရှောင် ဇေ လီ ဇေ La Défense စံပြ ပါရီမြို့သစ် နောက်ခံထားလို့ တွေ့မြင်ရပါတဲ့ Arc
de Triomphe အောင်ပွဲခံမုခ်ဦး နဲ့ Avenue des Champs-Élysées အာဗန်းညူး ဒေ ရှောင်ဇေလီဇေ
ရိပ်သာလမ်းမကြီး (ဓါတ်ပုံ မရငတ)
Zay) ရှောင် ဇေ လီ ဇေ . … ဒီ
အမည် . . .. … ….. ကြားဖူးသူများ ရောက်ဖူးသူများ
စာလုံးပေါင်း Champs-Élysées မြင်တာနဲ့ ကြားဖူးကြတဲ့ Shah
အသံထွက် ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူးလို့ အဲဒီ စာလုံးပေါင်းကို မြင်ဖူးကြသူတွေ တွေးမိမှာပါ၊
အဲဒီ လမ်းမကြီးက ပါရီမြို့ကို
ရောက်လာရင် တရက်သာ အချိန်ရရ နေ့တဝက်လောက် အချိန်ရရ
ရောက်ရမှာပါ၊ အီဖယ်ရယ် ရှောင်ဇေလီဇေရယ် ... ….. …... မနားရင်သာ မနားရမယ်၊ ပါရီရောက်ရင်
ဒီ နှစ်ခုကို ဖြတ်သန်းသွားရမှာကတော့ အသေအချာပါ၊
ဘယ်လောက်ကြီးကျယ်တယ် ဘယ်လောက်ခမ်းနားတယ်၊ ရောက်ဖူးသူတွေ သိသလို
မရောက်ဖူးသေးသောသူများလည်း ဟိုဖတ်ဒီဖတ်ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင် အလွယ်တကူ သိနိုင်ပါတယ်၊
နီးပါး ရှည်လျှားတဲ့ ဒီ လမ်းမကြီးရဲ့ သမိုင်းအစကတော့ ၁၆၇၀ ခုနှစ်လို့ ဆိုပါတယ်၊
လမ်းမကြီးရယ် မဟုတ်ခဲ့ပါသော်လည်းဘဲ Palais et Jardin des Tuileries ပန်းခြံထဲက လမ်းတလမ်းအဖြစ်
ခေတ်ကာလမှာ ဒီ လမ်းမကြီး နာမည်ကြီးနေရတာကတော့ အနောက်ဘက်စွန်းက Arc de Triomphe de
l'Étoile အောင်ပွဲခံမုခ်ဦးကြောင့် ဖြစ်သလို လမ်းမကြီးရဲ့ အရှေ့ဘက် အစွန်းမှာရှိတဲ့
Obélisque de Louxor ခေါ် ကွန်းကော့ဒ်ကျောက်တိုင် Jardin des Tuileries ပန်းခြံတို့
Palais du Louvre လုဗ်ရ်နန်းတော် ပြတိုက်တို့ကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါတွေအားလုံး ပေါင်းစပ်လိုက်မှသာ
ပါရီသမိုင်း ပြင်သစ်သမိုင်းက ပြီးပြည့်စုံမှာပါ၊ တခုနဲ့တခုက ဆက်စပ်ပတ်သက် နေတာပါ၊ ဒါတောင်
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ယိုယွင်းပျက်စီးခဲ့တာတွေ ဖျက်စီးခံရတာတွေကို နှမျှောသတ
နေကြသူ သမိုင်းချစ်ကြသူတွေ အများကြီး ရှိနေပါသေးတယ်၊
ရှောင်ဇေလီဇေလမ်းမကြီးအောက်က မြေအောက်မေထရိုလိုင်း နံပတ် တစ် (Photo Google) Champs-Élysées
လမ်းမကြီးအောက် မြေအောက်ထဲမှာ ပြေးဆွဲနေတဲ့ မေထရိုလိုင်းကတော့ လိုင်း နံပတ်
တစ်ပါ၊ အဝါရောင်လိုင်းလို့ ဆိုပါစို့၊ ပါရီ မြေအောက်ရထားတွေရဲ့ ပထမဆုံးသောလိုင်းဖြစ်ပြီး
ပြည့်နှစ် ဂျူလိုင် ၁၉ ရက်နေ့မှာ စတင်ပြေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်လို့ နှစ်ပေါင်း ၁၁၅ နှစ် ပြည့်ပြီးခဲ့ပါပြီ၊
နံပတ်တစ်လိုင်းကို စီးတတ်ပြီဆိုရင် ပါရီမြို့ကို အဖော်မလို လည်လို့ပတ်လို့ ရပါပြီ၊
ပါရီ မြို့တော်ရဲ့ အဓိကနေရာတွေကို တောက်လျှောက်ဖြတ်သန်းသွားတာမို့လို့ လာရောက်လည်ပတ်သူ
ကမ္ဘာလှည့်တွေရောပါရီဇီယမ်တွေပါ တနှစ်ကိုခရီးသည် သန်းနှစ်ရာကျော်ခန့် စီးကြပါတယ်တဲ့၊
ပါရီ သမိုင်းရဲ့ ဂန္တဝင်နေရာတွေကို ဆက်သွယ်ပေးခဲ့တဲ့ ပထမဦးဆုံးသော မြေအောက်ရထားလိုင်းပါ၊
လိုင်းကို အဲဒီ နေရာမှာ ဦးစားပေး ဖောက်လုပ် တည်ဆောက်ကြဖို့ တွက်ချက်ခဲ့သူများကိုတော့
လေးစားထိုက်ပါတယ် ခင်ဗျား၊ ဒါပေမယ့် ပါရီကို လာလည်ကြသူများအတွက် အထူးသတိထားရမှာ ကတော့
အဲဒီ မောင်းသူမဲ့ အဝါရောင် မြေအောက်ရထားလိုင်း အမှတ်တစ်ပေါ်မှာက ဖမ်းသူမဲ့သော ကိုရွှေခါး မရွှေခါးများရဲ့ အန္တရာယ်ကြီးက တနေ့တခြား
ဆိုးရွားလာတာကိုပါ ခင်ဗျား၊ L'Avenue des Champs-Élysées (ဓါတ်ပုံ
ဘာအကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် အဲဒီ လမ်းမကြီး ရှောင်ဇေလီဇေပေါ်မှာ အောင်ပွဲခံ မုခ်ဦးကြီးရှိရာသို့
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က ဖြူနီဝါပြာလူမျိုးပေါင်းစုံဟာ ဦးတိုက်ရောက်ရှိလာပြီး အောင်ပွဲခံ လမ်းလျှောက်နေကြတာကတော့
နေစဉ်နဲ့အမျှ ကြက်ပျံမကျ စည်ကားနေတာပါဆိုရင် မမှားပါဘူး၊
နာမည်ကျော်လမ်းမကြီး Avenue des Champs-Élysées အမည်နဲ့ ပါရီမြို့ရဲ့လှပပုံလေး တွေကို
ဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ နယူးယောက်မြို့သား ပြင်သစ်နွယ်ဖွား ဂျူးလူမျိုးဖြစ်သူ ၁၉၇၀ ခုနှစ်များဆီက
နာမည်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ အဆိုတော်ကြီး Joe Dassin (၁၉၃၈-၁၉၈၀) ရဲ့သီချင်း “အိုရှောင်ဇေလီဇေ
Zay) ကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရင်း . . . .. .....
မောင်ရင်ငတေရဲ့ အို ….. ရှောင်ဇေလီဇေ စာစု ရေးသားမှုကို ဒီနေရာမှာ တခန်းရပ်နား လိုက်ပါတော့မယ်
ခင်ဗျား၊ ကျေးဇူး အထူး တင်ရှိပါတယ် ခင်ဗျား၊
….. ရှောင်ဇေလီဇေ Aux Champs-Elysees http://www.youtube.com/watch?v=d9V-zUlrhEE Arc de Triomphe အောင်ပွဲခံမုခ်ဦး
ထိပ်ကနေ မြင်တွေ့ရတဲ့ ရှောင်ဇေလီဇေ (ဓါတ်ပုံ
... ရှောင်ဇေလီဇေ ….. Aux Champs-Elysées Je
m'baladais sur l'avenue le cœur ouvert à l'inconnu
N'importe qui et ce fut toi, je t'ai dit
Champs-Elysées, aux Champs-Elysées
m'as dit "J'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous
Qui vivent la guitare à la main, du soir au
Alors je t'ai accompagnée, onachanté, on a
soir deux inconnus et ce matin sur l'avenue
Et de l'Étoile à la Concorde, un orchestre à
၁၉၀၀ ပြည့်နှစ်က L'Avenue des Champs-Élysées (Photo Google)
အိုး … ရှောင်ဇေလီဇေ ….. The Champs-Elysées I trotted on the
avenue the heart open to the unknown I wanted to say hello to anyone Anyone and that was you, I told you anything It was enough to tell you to make you mine The
Champs-Elysées, the Champs-Elysées The sun,
in the rain, at midday or midnight There is everything you want at
Champs-Elysées You told me
"I have an appointment inabasement with crazy Living guitar in hand, from dusk to dawn
with thousand cords All the birds at day sing of love.
လွန်ခဲ့တဲ့ တနှစ်ကျော်က ရေးသားထားဖြစ်တဲ့ ပါရီမြို့ရဲ့ အသည်းနှလုံး ပါရီပုံရိပ်များထဲက နံပတ်တစ် တခုဖြစ်တဲ့ * ** အိုး … ရှောင်ဇေလီဇေ ရိပ်သာ လမ်းမကြီးအကြောင်း ** ** * အသစ်စက်စက် ကမ်းဝေးကြိုးကြာ အင်တာနက်စာမျက်နှာ အတွက် . . . . . . . .. .. ….. …..
ပါရီမှာ သောင်တင်နေတဲ့ .. . … …… …...